LEGO® Life 2.4.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.4.1 လြန္ခဲ့ေသာ4လက
Application မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖေရး LEGO® Life
LEGO® Life ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Lego ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာအသိုင်းအဝိုင်း join ။ အေးမြစိန်ခေါ်မှုများအောင်နိုင်, ဒစ်ဂျစ်တယ်အဆောက်အဦညွှန်ကြားချက်အရ, ပျော်စရာဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုအခြား Lego ပရိတ်သတ်များထံမှဖန်တီးမှုမြင်လျက်ပင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုမျှဝေပါ။ ဒါဟာ Lego ဘဝရာနေ့ရက်ကာလ၌လူအပေါင်းတို့ပဲ! တစ်ဦးကဘေးကင်းလုံခြုံအသိုင်းအဝိုင်းယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအဘို့အထူးတည်ဆောက်LEGO®ဘဝကသုံးစွဲဖို့ 100% ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အခမဲ့နှင့် 100% ပျော်စရာပါပဲ။
- Lego ဘဝကပျော်စရာ, ဖှယျ, ကြောက်မက်ဘွယ်နှင့်အေးမြပစ္စည်းပစ္စယပြည့်ဝ၏။ ထိုသို့အားလုံးဥစ္စာပါပဲ။
- သင့်ကိုယ်ပိုင် Lego အုတ်သူတို့နှင့်အတူစမ်းပြီးတော့ - အခြားသူများကိုတည်ဆောက်နေကြတယ်ဆိုတာကို၏ပုံရိပ်များထွက် Check!
- Lego Minecraft ™, Lego စီးတီး, Lego သူငယ်ချင်းများနှင့်ပိုပြီးအကြောင်းကိုနောက်ဆုံးပေါ် Lego သတင်းကိုရယူပါ။
တစ်နေရာတည်း၌သင်တို့၏ Lego ငွေကောက်ခံ!
- တစ်ဦး Lego ညွှန်ကြားချက်စာအုပ်ငယ်ပေါ်တွင် QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်သို့မဟုတ်သင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် Lego စုဆောင်းမှုရန်သင့်ထုတ်ကုန်ကိုထည့်သွင်းဖို့ app ကိုပေါ်တွင်သင်၏ထုတ်ကုန်များအတွက်ရှာဖွေ။
- ညွှန်ကြားချက် PLUS * သငျသညျလှညျ့ကွပါစသောအဒစ်ဂျစ်တယ်အဆောက်အဦညွှန်ကြားချက်, zoom ကို အသုံးပြု. Lego အစုံ Build နှငျ့သငျတစ်ခုအလိုလိုသိ Lego အဆောက်အဦအတွေ့အကြုံကိုပေးခြင်းကိုအထူးတစ္ဆေ mode မှာသင့်ရဲ့မော်ဒယ်ကိုကြည့်ပါ။
Lego ဗီဒီယိုများ Watch!
- စူပါသူရဲကောင်းများ™ Lego Elves, Lego မိတ်ဆွေများ, Lego စီးတီး, Lego အံ့ဩခြင်းစူပါသူရဲကောင်းများနှင့် Lego DC ကကာတွန်းထဲကနေ mini ကိုရုပ်ရှင်နှင့် webisodes နှင့်အတူထွက် Chilling ။
- Lego NINJAGO ထံမှ Kai တူသော Lego အစုံနှင့် Lego ဇာတ်ကောင် featuring ဗီဒီယိုများနှင့်အတူနောက်ကွယ်မှသွားပါ။
အဆိုပါLEGO®ဘဝ Emoticons Keyboard ကိုနှင့်အတူလုံခြုံစိတ်ချစွာ chat!
- တစ်ခုလုံးအသစ်ကပျော်စရာအမြင်အာရုံဘာသာစကားမပြောတတ်ဖို့ Lego Keyboard ကိုသုံးပါ
- ကမ်ဘာပတ်ပတ်လည် Lego ပရိတ်သတ်များနှင့်အတူလုံခြုံစွာနှင့်အပြုသဘောဆက်သွယ်!
- တစ်ဦး Lego အကောင့် Get နှင့် Lego ဘဝအပေါ်တစ်ဦး SUPER USER မှဖြစ်လာဖို့အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။ သင် ... ဖြစ်လိမ့်မည်:
- သင့်အံ့သြဖွယ် Lego တည်ဆောက် Share
- သင်တို့ကိုတွေ့မြင်သူအပေါင်းတို့ကိုအေးမြပစ္စည်းပစ္စယပေါ်တွင် Comment
- သင့်နဲ့ Save
- သင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးယင်းအုပ်စုများ Save
- သင့်သူငယ်ချင်းများစာရင်း Save
- အဆိုပါ Lego ဘဝက app ကို download မှအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
- ဒါဟာ5နှစ်နှင့်ချီထံမှသင့်လျော်မယ့်, ဒါပေမယ့် 8-12 အကြားအသက်လေးတွေနှင့် Tween အရှိဆုံးကပျော်မွေ့ဖွယ်ရှိပါတယ်။
- အဘယ်သူမျှမ Third-party ကြော်ငြာရှိပါတယ်။ Lego စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာနှင့်သတင်းအချက်အလက်များသားသမီးရဲ့ဖန်တီးမှုကစားဖှယျ၏မျှော်လင့်ချက်အတွက်, Lego အစုံနှင့်အခြား Lego ဂိမ်းအကြောင်းကိုဥပမာအားဖြင့် Lego သတင်းအဘို့, တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။
- ဒီ app / ကို disable Push ကိုအသိပေးချက်များ enable လုပ်ဖို့ option ကိုပါဝင်သည်။ အသိပေးချက်များ Push သူတို့ဖန်တီးမှုရက်နေ့တွင်အကြိုက်များနှင့်မှတ်ချက်များကိုလက်ခံရရှိသောအခါ 1) သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှု) ကြှနျုပျတို့၏အဆုံးအဖြတ်ပေးနဲ့2ကအတည်ပြုပြီပြီးမှငါတို့အသုံးပြုသူများကသတိပေးမှအသုံးပြုကြသည်။
အဆိုပါ Lego Group မှ Lego ဘဝကလုံခြုံအောင်မှဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည်:
- အပြည့်အဝ app ကိုပျော်မွေ့ရန်, ကလေးတွေကိုမိဘတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ် Lego အကောင့်ကိုဖန်တီးရန်အုပ်ထိန်းသူခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါတယ်။
- ကလေးများအကြောင်းအရာမှတ်ချက်သို့မဟုတ် like နှိပ်သည့်အခါတစ်ဦး Lego နစ်နာမကိုအမှီ created ကိုအသုံးပြုပါ။
- တိုက်ရိုက် chatting ခွင့်မပြုပါ
- ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော် Images ကိုပယ်ချနေကြသည်။
ယင်း Lego အကောင့်နိမိတ်လက္ခဏာကို-Up ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကျနော်တို့အောက်ပါအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပါလိမ့်မယ်:
ကျွန်တော်တစ်ဦး, လုံခြုံညွှန်းများနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Lego ဘဝအတှေ့အကွုံပေးသင့်အကောင့်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ် anonymised data တွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်အသုံးချပါလိမ့်မယ်။ သင်ပိုမိုကဒီမှာလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်
http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy ဒီမှာ http://aboutus.lego.com/en-us/legal-notice/terms-of-use-for-apps
သငျသညျပုံသို့မဟုတ် Lego ဘဝတစ်မှတ်ချက် upload တင်သောအခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အဲဒီက Lego Group ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာအစ, ငါတို့သည်သင်တို့၏ရုပ်ပုံဖို့အခွင့်အရေးများကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းသင်သည်သင်၏မော်ဒယ်, သင့်အကြံပြုချက်များ, မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်မေးခွန်းများကို (သင့် "ပစ္စည်း") ပေးအပ်ထားသောလမ်းကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါ Lego Group မှလျော်ကြေးမလိုပဲသမျှသောစကားတို့ကိုဆိုရညျရှယျအဘို့သင့်ပစ္စည်းသုံးစွဲဖို့ခွင့်ရှိသည်။
Lego က, Lego လိုဂို, ထိုအုတ်များနှင့် knobs configurations နှင့် Minifigure ယင်း Lego Group ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ © 2018 အဆိုပါ Lego Group မှ။
* ညွှန်ကြားချက် PLUS သာရွေးချယ်ထားသည့်ထုတ်ကုန်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
LEGO® Life အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
LEGO® Life အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
LEGO® Life အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
mr-robot-games စတိုး 6.91k 12.68M
LEGO® Life ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း LEGO® Life အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://wwwsecure.lego.com/legal/legal-notice/privacy-policy-full
လက်မှတ် SHA1: 45:26:A7:9B:83:03:A0:50:AF:42:EC:B3:03:E3:AE:6A:35:82:28:C6
နယ်မြေ (L): 7190 Billund
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Aastvej 1
LEGO® Life APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ